Football Khabar » जिदानले छाने आफ्नो बेस्ट प्लेइङ–११ : को–को परे ?
जिदानले छाने आफ्नो बेस्ट प्लेइङ–११ : को–को परे ?
आफ्नो समयका सुपरस्टार खेलाडी तथा हाल स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड क्लबको प्रमुख प्रशिक्षक रहेका जिनेदिन जिदानले आफ्नो उत्कृष्ट प्लेइङ–११ छानेका छन् । फ्रान्सका म्यानेजर जिदानले आफ्नो करिअर दौरान फ्रान्सबाट विश्वकपसमेत जितेका थिए । उनै जिदानले हालै आफ्नो ड्रिम टिम छानेका छन् ।
उनले आफ्नो ड्रिम टिममा सबै आफ्नो समयका खेलाडी र सहकर्मीलाई राखेका छन् । उनले टिममा आफूलाई भने राखेका छैनन् । त्यस्तै, उनको सूचीमा पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो र अर्जेन्टिनाका लिओनल मेस्सी दुवै परेका छैनन् । जिदानले छानेको आफ्नो ड्रिम टिम यस्तो छ–
गोलकिपर – इकर क्यासिल्लास
डिफेन्डर – माइकल साल्गाडो, इभान हेल्गुएरा, पाओलो मोन्टेरो, रोवर्टो कार्लोस
मिडफिल्डर – डिडिएर डेस्च्याम्प्स, एल्सियो टाच्चिनार्डिप्स, गुटी
फरवार्ड– लुइस फिगो, राउल गोन्जालेज र क्रिस्टोफे डुगारी
प्रकाशित मिति २२ बैशाख २०७७, सोमबार २१:४१